‘आफ्ना कामको नियमित समीक्षा गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ’ « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०७७, बुधबार १४:२८
२०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा साविक च्याङथापू गाउँ विकास समितिको उपाध्यक्ष चुनिएर जनताका काम गर्नुभएका मोहनकुमार ढुङ्गेल झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा च्याङथापू गाविस नै समेटिएको याङवरक गाउँपालिका वडा नं. १ को वडाध्यक्ष पदमा विजयी भई काम गर्दै आउनुभएको छ । विगतमा समेत जनप्रतिनिधिको भूमिका रहि काम गर्ने सिलसिलामा प्राप्त अनुभवका आधारमा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारमा रहेर ढुङ्गेलले भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको यो वडामा जिल्लाकै पुरानो मध्येको च्याङथापू बजार समेत अवस्थित छ । जनप्रतिनिधिको भूमिकामा तीन आर्थिक वर्षसम्म कार्यसम्पादन पूरा गर्नुभएका ढुङ्गेलसँग याङवरक सन्देशले वडाध्यक्ष ढुङ्गेलका विगत कार्यवधिको समीक्षा, वर्तमानको स्थिति र भविश्यका योजना तथा कार्यक्रमहरु सहित समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेको छः
यहाँले विगतमा गाउँ विकास समितिको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहि काम गरिसक्नु भएको छ भने वडाध्यक्षको भूमिकामा तीन वर्ष समय विताइसक्नु भएको छ । विगतको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहमा फरक–फरक भूमिकामा रहेर काम गर्दा के–कस्तो अन्तर पाउनुभयो ?
– म विगतमा गाउँ विकास समितिको उपाध्यक्ष हुँदा र अहिले वडाध्यक्ष रहँदाको अवस्थालाई तुलना गर्दा अहिले कामको जिम्मेवारी थपिएको, विकास निर्माणका काम धेरै भइरहेको छ । विगतमा थोरै बजेटले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले धेरै बजेट र धेरै कामको चाप छ । अहिले स्थानीय तहबाट मात्रै नभई प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र योजनाको समेत अनुगमन र रेखदेख गर्नुपर्ने, धेरै क्षेत्रका बैठकहरुमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ ।
विगतमा एउटा गाविसमा ४९ जना जनप्रतिनिधि हुन्थ्यौँ भने अहिले पाँच जनाले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो वडामा त वडा सदस्य नरबहादुर गुरुङ जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य चुनिनु भएपछि चार जनाले काम गर्दै आएका छौँ । यस्तो अवस्थामा सबै योजनाका काममा हामी पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन् । त्यसैले के कति उपलब्धि भयो भने कुरामा हामीलाई धौ–धौ पर्छ । गुणस्तरीय काम भए नभएको नहेरी योजनालाई पूर्णता दिएर जाने कुरा समेत भएन् ।
अर्को कुरा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सीमा क्षेत्र लगायत विषयमा समेत चासो दिनुपर्छ । हाम्रो वडा भारतसँग सीमा जोडिएको भएकलो हामीले सीमा क्षेत्रको समेत नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले विगतमा भन्दा आम क्षेत्रमा प्रभावकारी काम भएको मैले पाएको छु ।
यहाँहरु जनप्रतिनिधिको भूमिकामा निर्वाचित भई तीन वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ । यस अवधिमा याङवरक गाउँपालिका वडा नं. १ मा विकास निर्माणका के–के महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् ? यहाँ यस अवधिमा भएका अन्य सुधार र परिवर्तनका पक्षहरुले के–के हुन् ?
– परिवर्तित समयमा संघ र प्रदेशबाट यथेष्ट बजेट आएको छ । यहाँ च्याङथापू र फलैंचा बजार सहित आसपासको क्षेत्रका लागि खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यो आयोजनाले दुई वडाका सयौँ परिवारलाई लाभान्वित गर्दछ । यस्तै फाक्लुङ–फालोट सडकलाई गाउँपालिका, प्रदेश र संघबाट बजेट प्राप्त भई काम भइरहेको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार फुसको छानो हटाउन कार्यक्रममा गत वर्ष ७ घरमा जस्तापाता लगाइएको थियो भने यस वर्ष ७० वटा घरको फुसको छानो हटाउने तयारी गरेका छौँ ।
याङवरक गाउँपालिकाले वडामा सिलिङबाट प्राप्त हुने बजेट बाहेक प्रत्येक वर्ष ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ दिइरहेको छ । उक्त रकमको ठूलो हिस्सा लामपोखरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा खर्च भएको छ । म उपाध्यक्ष भएकै बेलाबाट सुरु भएको लामपोखरी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा गाउँपालिकाले जोड दिएको छ । यहाँसम्म बाटो पु¥याई पर्यटकीय गन्तब्य बनाउन सकियो भने यहाँका स्थानीयवासीको जिविकोपार्जनमा सुदृढिकरण हुन्छ भन्ने विश्वासले गाउँपालिकाले यहाँ लगानी गरिरहेको छ । यहाँसम्म सहज ढङ्गले बाटो पु¥याउने तथा पर्यटकीय आवास गृह निर्माण निर्माण गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । यस वर्षको ३० लाख रुपैयाँ बजेटबाट लामपोखरी क्षेत्र पर्यटकीय आवास गृह निर्माण र मर्मत, लामपोखरी जाने बाटो मोटरबाटो मर्मत तथा याङवरक–१ खेलमैदान निर्माणमा छुट्टयाएका छौँ ।
वडामा आएको रकम जनताका लागि अत्यावाश्यक बाटो निर्माणमा जोड दिएका छौँ । हाम्रै वडामा गाउँपालिकाको अत्यन्त महत्वपूर्ण काम आवाशीय विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । अहिले २५ जना बालबालिकालाई आवासमा राखेर सम्पूर्ण प्रवन्ध गरेर पठन–पाठनको ब्यवस्था गरेका छौँ । खानेपानीको पहुँच नपुगेका घरधुरीका लागि फुटकर पाइप तथा साना खानेपानी आयोजना समेत निर्माण गरिरहेका छौँ । अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा गाउँपालिकाले विशेष जोड दिएअनुसार र गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
यति काम हुँदै गर्दा यस वडामा तत्कालै थप बजेट आवश्यक परेका क्षेत्रहरु कुन–कुन हुन् ?
– हामीले थालेको याङवरक–१ खेलमैदानको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यहाँ भारतदेखि समेत खेलाडीहरु काम गर्न आउँछन् । हामीले सोचभन्दा बढी काम गरेको मेरो अनुभूति छ । प्रत्येक टोलमा पु¥याइएका सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, सबै घरधुरीमा खानेपानीको ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सम्वद्र्धन पनि आवश्यक छ ।
यो वडा भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र भएकाले र यहाँ कृषि, पर्यटन, जैविक विविधता, जडिबुटी लगायत सम्भावनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको छ । आगामी दिनमा वडा र गाउँपालिकाले स्थानीयवासीको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै के–कसरी आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाउनु पर्ला ?
– विशेषत हामी गाउँपालिकाका मुख्य प्राथमिकता योजनाहरु सहित यहाँका जनताको दीगो आयआर्जनका लागि कृषिको ब्यवसायिक विकास तथा कृषि क्रान्ति, जडिबुटी तथा जैविक विविधता प्रवद्र्धन लगायत सम्भावनाका क्षेत्रहरुमा जोड दिइनुपर्छ । अहिले भर्खरै हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति भएको सशस्त्र प्रहरीबो बीओपी स्थापना भएको छ । यसले चोरी निकासी तथा जैविक विविधतामा आँच पु¥याउनबाट रोक्छ । यहाँ लामपोखरी तथा लालिगुराँस क्षेत्र, चिवाभञ्ज्याङ र तिम्बुपोखरी जाने मार्ग यहिँ पर्दछ । यी क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउने काम गर्नु अत्यावाश्यक छ ।
विशेषत बाहिरबाट आएका पर्यटकलाई हामीले के दिन सक्छौँ भन्ने मुख्य कुरा भएको छ । यहाँ केही नयाँ उत्पादन गरेर जस्तै काठका, अल्लोका, ढाकाका सामग्री उत्पादन गर्न सक्यौँ भने विक्री पनि हुन्छ र जिविकोपार्जन पनि हुन्छ । यहाँ होटल तथा होमस्टे ब्यवसाय सञ्चालनको सम्भावना समेत छ । यसका लागि तालिमको आवश्यकता छ । यहाँ जाऔँ जाऔँ, बसौँ बसौँ भन्ने बनाउनुपर्ने, बजार क्षेत्रलाई स्वच्छ र सफा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो सँगसँगै हामीले गरेका, सुरुआत गरेका विकास निर्माणलाई पूर्णता दिने पक्षमा हामी लाग्छौँ ।
यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँचथर बाहिरका धेरै सेवाग्राहीले सेवा लिएको अवस्था छ । अव यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सवलिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि यहाँहरुको कदम के हुन सक्छ ?
– च्याङथापू स्वास्थ्य चौकीले च्याङथापू र फलैंचाका स्थानीयवासीहरु सहित छिमेकी जिल्ला ताप्लेजुङका स्थानीयवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । यदाकदा सिक्किमका स्थानीयले समेत यहाँबाट सेवा पाउने गरेका छन् । विगतको अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै गाउँपालिकाको बजेटबाट जीर्ण अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य चौकीको अवस्था परिवर्तन गरेका छौँ । विगतमा वर्थिङ सेन्टर थिएन्, अहिले वर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौँ ।
घेराबारा थिएन्, रङ्गरोकन थिएन, अस्तब्यस्त थियो, त्यो अवस्था फेरेका छौँ । यहाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि वडाबाट सिफारिस भई माथिल्ला निकायमा पहल भइरहेको छ । यहाँबाट ताप्लेजुङको कालीखोला, सादेवा र आङ्खोपका सेवाग्राहीले यहाँबाट सेवा लिइरहेका छन् । गाउँपालिकाले ३१ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने योजना बनाएअनुसार हामीले त्यसलाई यहाँ पनि कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई राहत पु¥याउने प्रयास गरेका छौँ । गाउँपालिका स्वयम्ले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिएको छ । करारमा पनि स्वास्थ्यकर्मी राखेका छौँ ।
हाम्रो वडामा आवाशीय विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । यसले दुर्गमका, जोखिमयुक्त बाटो र विद्यालय भएका तथा विद्यालय पठाउन नसक्ने परिवारका बालबालिकाले विद्यालय जान पाएका छन् । निःशुल्क पठन–पाठनको अवसर पाएका छन् । १ नं. वडाले विपन्न वर्गका बालबालिकालाई पोशाकको ब्यवस्था गर्दै आएको छ । हामीले एकै पटक सबै रकम शिक्षामा लगाउन नसकिने हुँदा बालबालिकालाई सानो तिनो सहयोग गर्दै आएका छौँ ।
हामीले विपन्न वर्गका बालबालिकालाई पोशाक, स्वीटर, जुत्ता, कापी कलम, झोलाको ब्यवस्था गरेका छौँ । यस वर्ष सिंहदेवी आधारभूत विद्यालय साविक च्याङथापू–४ समरजुङका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने तयारी गरेका छौँ । यस वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि रु. ५० हजार बजेट छुट्टयाएका छौँ । शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन भौतिक संरचना ब्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले नियमित बजेट छुट्टयाउँदै आएको छ ।
यहाँहरु वडाको नेतृत्व सहित गाउँपालिका सञ्चालनको नीतिगत निर्णय लिने निकाय गाउँ कार्यपालिका सदस्य समेत हुनुहुन्छ । कार्यपालिकामा वडाध्यक्षहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । हालसम्मका तीन वर्षमा समग्रमा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको अवस्था, विकास निर्माणको अवस्था के–कस्तो छ ? यहाँहरुको स्वमूल्याङ्कन कस्तो छ ?
– समग्रमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र तय भएका कार्यक्रमहरु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीस्तरबाट कार्यान्वयनमा गइरहेका हुन्छन् । गाउँपालिकाले निर्णय मात्रै गरेको छैन् । निर्णय कार्यान्वयन, प्रगति लगायतको समीक्षा र विश्लेषण पनि गरेका छौँ । एउटा बैठकको निर्णय अर्को बैठकमा समीक्षा हुन नसके त्यो भन्दा अर्को बैठकमा समीक्षा गर्ने गरेका छौँ । निर्णयहरु कार्यान्वयन भए÷नभएको हेरिरहेका, अनुगमन गरिरहेका छौँ । निर्णयहरु कार्यान्वयन नभए सम्बन्धित जिम्मेवारी प्राप्त ब्यक्तिलाई सचेत र जिम्मेवार तुल्याउँदै आएका छौँ ।
विशेषत याङवरक गाउँपालिकाको अवस्था अन्य गाउँपालिकासँग तुलना पनि गरेका छौँ । हामी समग्रमा अन्य गाउँपालिकाभन्दा अघि छौँ हाम्रो महशुस छ । हाम्रो ठूलो आँटले वडा नं. २ र ५ मा वडा कार्यालय निर्माण सुरु भएको छ । गाउँ कार्यपालिकाको भवन पनि निर्माण सुरु भएको छ । भोली जनताले अनुभूति गर्ने केही काम गर्ने हाम्रा योजनाहरु कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । मलाई प्राप्त सूचनाअनुसार याङवरक देवस्थललाई नमूना बनाउन संघीय सरकारबाट ठूलो सहयोग मिल्ने बुझिएको छ । आवश्यक पर्ने, टड्कारो देखिएका तथा सुझावमा आएका सबै काम गर्न गाउँपालिका पछि परेको छैन् र पछि पर्दैन् ।
यहाँको वडामा भएका अन्य महत्वपूर्ण सुधार र परिवर्तनका पक्षहरु के–के छन् ? नागरिकस्तरबाट यहाँहरुलाई के–कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ?
– समग्रमा हामीले प्रवाह गरेको सेवा र हामीले अगाडि बढाएका विकास निर्माणका कामहरुबाट जनता खुशी र सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । हामी उपभोक्ता समिति गठन गर्न टोल–टोलमा पुगेका छौँ । जनताले बजेट पाएपनि केही कम भएको गुनासो आउने गर्दछ । बजेट बढि होस् भन्ने आम अपेक्षा छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज रुपमा प्राप्त गर्न च्याङथापूमै बैङ्क स्थापना होस् भन्ने आम नागरिकको माग छ ।
अन्त्यमा यहाँको भन्नु केही छ कि ?
हामीले सुरुआत गरेका विकासका योजनालाई पूर्णता दिने, पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुको विकल्प छैन् । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण जिविकोपार्जन सुधारका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र कृषि क्रान्तिको विकल्प छैन् । सवै पक्ष यसैमा लाग्नुपर्छ । र, अन्त्यमा नजिकिएका सबै चाडपर्वहरुको वडावासी सहित आम गाउँपालिकावासीमा हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।